မန်စီးတီး Vs ချဲလ်ဆီး? ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၃ အတွက် မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ - SPORTS MYANMAR
မန်စီးတီး Vs ချဲလ်ဆီး? ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၃ အတွက် မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ
နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ်တွေ အပြီးမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲက ပြန်လည် ရောက်ရှိ လာခဲ့ပါပြီ။ ပရီးမီးယားလိဂ် ကြယ်ပွင့်ဟောင်း မိုက်ကယ်အိုဝင်ဟာ ဖရန့်လမ်းပတ်ရဲ့ အသင်း အီတီဟတ် မှာ သွားရောက် ကစား ရမယ့် ပွဲကြီး ပွဲကောင်း အပါအဝင် ဒီတစ်ပတ် လိဂ်ပွဲစဉ်တွေ အားလုံး အတွက် ရလဒ်တွေကို ခန့်မှန်း ပေးသွားခဲ့ ပါတယ်။
၁~ဝက်ဟမ်း Vs တော့တင်ဟမ်
ဝက်ဟမ်းဟာ နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ လိဂ်ပွဲစဉ် ၅ ပွဲမှာ ၄ ပွဲ အထိ ရှုံးနိမ့် ထားခဲ့ပြီး စပါး အသင်း ကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှစ် တစ်ခုကျော် အတွင်း ပရီးမီးယားလိဂ် ၁၂ ပွဲအပြီးမှာ ရမှတ် အနည်းဆုံး မှတ်တမ်းကို ရရှိနေ ခဲ့ပြီး ရမှတ် ၁၄ မှတ်သာ စုဆောင်း ထားနိုင် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီပွဲဟာ ပုံစံကောင်း ရနေတဲ့ အသင်း နှစ်သင်းရဲ့ ပွဲလို့ ပြောလို့ မရနိုင် ပါဘူး။ ဝက်ဟမ်းတို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ တပ်မိုးမှာ ရှံုးပွဲ ကြံုခဲ့ ရပေမယ့်လည်း ပယ်လီဂရီနီဟာ ဟမ်းမား ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ ထောက်ခံမှုကို ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ ဒီယုံကြည်မှုရဲ့ ဆုလဒ်ကို လန်ဒန်စတေဒီယမ် မှာ ပြန်လည် ရရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကို ဂိုးပြတ် ရှံုးနိမ့် ခဲ့ပေမယ့်လည်း စပါးဟာ နောက်ဆုံး ကစား ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်မှာ ဒီရာသီ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းကို ပြန်လည် ပြသ ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ ဖျော်ဖြေမှု အပြည့်ပေးစွမ်း နိုင်မယ့် လန်ဒန်ဒါဘီမှာ အိမ်ရှင် အသင်း ကပဲ ကပ်ပြီး နိုင်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက် – ဝက်ဟမ်း ၂ – ၁ စပါး
အာဆင်နယ်ဟာ ကင်းပါဝါမှာ နောက်ဆုံး ကစား ခဲ့တဲ့ လိဂ်ရှံုးပွဲမှာ ပြိုင်ဘက် ဂိုးပေါက်ကို တစ်ကြိမ်သာ တည့်မတ် ခဲ့ပြီး ဂန်းနား တို့ဟာ ပဲလေ့စ် ၊ ဝုဖ် တို့နဲ့ အမ်းမရိတ်မှာ ကစား ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး ပွဲစဉ် အချို့မှာလည်း နိုင်နေတဲ့ အနေအထား ကနေ အမှတ်တွေ ဆုံးရှံုး ခဲ့ပါတယ်။ အူနိုင်းအမ်မရီရဲ့ အသင်းဟာ လက်ရှိမှာ အဆင့် လေးနေရာ က အသင်းနဲ့ ရမှတ် ၈ မှတ်ထိ ကွာဟနေပြီး ဂန်းနား နည်းပြ အနေနဲ့ တန်းဆင်းဇုန် ရဲ့ အထက် တစ်နေရာ တစ်မှတ် အကွာမှာ ရှိနေတဲ့ စိန့်တို့နဲ့ ပွဲမှာ မဖြစ်မနေ အနိုင်ယူ သွားရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက် – အာဆင်နယ် ၃ – ၁ ဆောက်သမ်တန်
ပဲလေ့စ်ဟာ နောက်ဆုံး ကစား ခဲ့တဲ့ လိဂ်ပွဲစဉ် ၄ ပွဲမှာ အာဆင်နယ် ကို အဝေးကွင်းမှာ သရေကျခဲ့တဲ့ ရမှတ် တစ်မှတ်သာ စုဆောင်း နိုင်ခဲ့ပြီး အဲဒီနောက် ပဲလေ့စ်ဟာ စီးတီး ၊ လက်စတာ နဲ့ ချဲလ်ဆီး တို့ကို ၂-၀ ရလဒ်တွေနဲ့ ရှံုးခဲ့ ပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေးဇယား ထိပ်မှာ ၈ မှတ် အသာနဲ့ ဦးဆောင်လျက် ရှိနေပြီး အီးဂဲလ် တို့ အနေနဲ့ ဒီလို ပုံစံကောင်း ရနေပြီး တစ်သင်းလုံး ယုံကြည်မှု ပြည့်ဝ နေတဲ့ ကြိုးကြာနီ တို့ကို ရပ်တန့် နိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် အံ့သြ မိမှာပါ။
မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက် – ခရစ်စတယ်ပဲလေ့စ် ၀ – ၂ လီဗာပူး
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ပွဲစဉ် ကတော့ အီတီဟတ် မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချန်ပီယံ မန်စီးတီး အနေနဲ့ ဒီပွဲမှာ အနိုင် ၃ မှတ် ရခဲ့မယ် ဆိုရင် ချဲလ်ဆီးရဲ့ အထက်ကို ပြန်လည် တက်လှမ်း လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စီးတီးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ချဲလ်ဆီးကို ၆-၀ နဲ့ နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ရာသီအစပိုင်း စတန်းဖို့ဒ်ဘရစ်ချ် မှာ ကစား ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် မှာတော့ ချဲလ်ဆီးဟာ စီးတီးကို အနိုင် ကစား နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ မှာ ကစား ခဲ့တဲ့ ကာရာဘောင်ဖလား ဖိုင်နယ် မှာတော့ ဒီနှစ်သင်းဟာ ဝင်ဘာလေမှာ ဂိုးမရှိ သရေ ကျခဲ့ပြီး ပက်ဂွာဒီယိုလာ ရဲ့ အသင်းဟာ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်မှာ အနိုင် ရရှိ ခဲ့တာပါ။
စီးတီးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ လီဗာပူးကို အန်ဖီးမှာ ရှံုးနိမ့် ခဲ့တာကြောင့် နောက်ထပ် ရမှတ်တွေ ဆုံးရှံုး ခံလို့ မရတော့ပါဘူး။ အကယ်၍ ၎င်းတို့ အနေနဲ့ ၃ ကြိမ်ဆက် ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား အတွက် လီဗာပူးကို ဆက်လက် ဖိအားပေးချင်တယ် ဆိုရင် အထူးသဖြင့် အီတီဟတ်မှာ ရမှတ် ဆုံးရှံုးလို့ မရ တော့ပါဘူး။ ချဲလ်ဆီးဟာ ဖရန့်လမ်းပတ်ရဲ့ လက်အောက်မှာ ခြေစွမ်း တိုးတက် လာခဲ့ပြီး စိတ်လှုပ်ရှား စရာ ကောင်းတဲ့ ဒီလူငယ် အသင်းဟာ ယုံကြည်မှု ပြည့်ဝ နေတဲ့ အပြင် အရည်အသွေး ကလည်း ရှိနေ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျားနာလို ဖြစ်နေတဲ့ ပက်ဂွာဒီယိုလာ ရဲ့ အသင်း အတွက် အန်ဖီး ရှံုးပွဲဟာ နိုင်ငံတကာပွဲစဉ် တွေကြောင့် ခံစားရ ကြာရှည် နေမှာကို သတိထား ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက် – မန်စီးတီး ၃ – ၂ ချဲလ်ဆီး
၅~ ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် Vs မန်ယူနိုက်တက်
ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ဒီရာသီ ရဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာ လုပ်ပြနိုင်ဆုံး အသင်း ဖြစ်ပြီး Bramall Lane ဟာ ဒီရာသီ နောက်ဆုံး လိဂ် အဝေးကွင်း ၆ ပွဲမှာ ၅ မှတ်သာ ရယူ နိုင်ခဲ့တဲ့ မန်ယူနိုက်တက် အတွက် ခက်ခဲကြမ်းတမ်း နေမှာ သေချာပါတယ်။ ရာသီ အစမှာတုန်းက အိုလီဂန်နာ ဆိုးရှား ရဲ့ အသင်း အနေနဲ့ နိုဝင်ဘာလကုန်မှာ ရှက်ဖီးရဲ့ အောက်မှာ ရပ်တည် နေမယ် ဆိုတာ လူအနည်းငယ် ကသာ ထင်မှတ် ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ ဒီနှစ်သင်းကြား ရမှတ် ကွာဟမှု ဒီအတိုင်း ဆက်ရှိ နေမယ်လို့ ယုံကြည် နေပြီး သွင်းဂိုး နည်းနည်းနဲ့ သရေကျ သွားမယ်လို့ပဲ ထင်ပါတယ်။
မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက် – ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် ၁ – ၁ မန်ယူနိုက်တက်
အခြား ပွဲစဉ်တွေ အတွက် အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ
ဘုန်းမောက် ၀ – ၁ ဝုဖ်
ဘရိုက်တန် ၁ – ၂ လက်စတာ
အဲဗာတန် ၃ – ၁ နော့ဝှစ်
ဝက်ဖို့ဒ် ၂ – ၂ ဘန်လေ
အက်စတွန်ဗီလာ ၁ – ၁ နယူးကာဆယ်